अख्तियारबाट रकम छली गर्न ठुला आयोजना सेनालाई ठेक्का
आफैले बोकेको एम १६ पड्किँदा नेपाली सेनाका जवानकाे मृत्यु
काठमाडौं । धनकुटाको बरख गणमा कार्यरत एक सैनिक जवानको आफैले बोकेको बन्दुक पड्किँदा मृत्यु भएको छ ।
सेनामा अब ‘फास्ट ट्र्याक’बाट बढुवा नहुने
काठमाडौँ । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल निजामती सेवाको २४ घको जस्तो नेपाली सेनामा पदक्रम (चेन अफ कमाण्ड) नै बिग्रने गरी गरिएको ‘फास्ट ट्र्याक’ बढुवा व्यवस्था सच्याइएको बताएका छन् ।
गोठालाको खोजी गर्न धादिङकाे रूबीभ्यालीमा सेना परिचालन
धादिङ । ओडारमा भेडाबाख्रासहित पहिरोले पुरिएर हराइरहेका दुई गोठालाको खोजी नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले संयुक्त रुपमा गर्ने भएका छन् ।
काठमाडौँ । प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा ६ दिने भारत भ्रमण पूरा गरी स्वदेश फर्किएका छन् ।
नेपालले अमेरिकाबाट ६ अर्ब ९० करोडको हतियार खरिद गर्ने, के के किन्दैछ ?
काठमाडौं । यो बर्ष नेपाली सेनाका लागि ६ अर्ब ९० करोडबराबरको हतियार खरिद गर्ने तयारी छ ।
नेपाली सेनाः कन्ट्रक्सन कम्पनी, व्यापारी कि सैन्यकर्मी ?
काठमाडौँ । गैरसैनिक क्षेत्रमा सक्रिय सहभागिताका कारण नेपाली सेना विवादित बन्दै गएको छ ।
काठमाडौं । नेपाली सेना भारतको पुनामा हुने बहुक्षेत्रीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) सदस्य राष्ट्रको संयुक्त सैनिक अभ्यासमा सहभागी नहुने भएको छ । सरकारको निर्देशनअनुसार संयुक्त अभ्यासमा नेपाली सेनाले सहभागिता नजनाउने निर्णय गरेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता गोकुल भण्डारीले जानकारी दिए ।